Saameynta Suuqgeynta ee Qeybta Koowaad iyo Xogta Dhinac Saddexaad | Martech Zone
In kasta oo ay xog-wadeyaasha suuq-geynta xogta ku tiirsan yihiin xogta dhinac saddexaad, Daraasad cusub oo ay sii daayeen Econsultancy iyo Signal ayaa muujinaya isbeddel ku yimid warshadaha. Daraasadu waxay ogaatay in 81% suuqleyda ka warbixisa ay helaan ROI-ga ugu sarreeya qorshooyinka ay keeneen xogta marka la isticmaalayo xogta-koowaad (marka la barbardhigo 71% asxaabtooda guud) iyadoo kaliya 61% ay xusayaan xogta dhinac saddexaad. Isbeddelkan ayaa la filayaa inuu sii qoto dheeraado, iyadoo 82% dhammaan suuqleyda la daraaseeyay ay qorsheynayeen inay kordhiyaan adeegsiga xogta qeybta koowaad (0% inay soo sheegaan hoos u dhac), halka 1 ka mid ah suuqleyda ay qorsheynayaan inay yareeyaan adeegsiga xogta qeybta saddexaad.
Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Xogta-Koowaad iyo Xisbiga Saddexaad
Xogta kooxda-kowaad waxaa ururiya oo iska leh ururkaaga. Waxay noqon kartaa xog lahaansho sida natiijooyinka sahanka macaamiisha iyo xogta wax iibsiga. Xogta dhinac saddexaad waxay uruurisaa hay'ad kale oo ama lagu iibsaday gebi ahaanba, lagu lifaaqay xogta macaamiishaada hadda, ama laga heli karo barnaamijyada dhinac saddexaad. Arrimaha badanaa waxay ka dhashaan saxnaanta iyo ku habboonaanta xogta dhinac saddexaad.
Xogta xisbiga labaad waa ikhtiyaar kale laakiin kambaniyaysan shirkadaha. Xogta xisbiga labaad waxaa lagu soo ururiyaa iskaashiga shirkadaha. Wadaagista dhageystayaasha, sicirka jawaabta ayaa aad uga sareyn kara, xogta macmiilku waxay noqonkartaa mid taajir badan, xogtuna wali waa sax iyo waqtigaba. Haddii aad ku dhibtooneysid inaad macluumaad dheeraad ah ka hesho macaamiishaada, waxaad u fiirsan kartaa la shaqeynta shirkad wadaag la ah macaamiishaada!
Muddo sanado ah, xogta dhinac saddexaad waxay udub dhexaad u ahayd suuqgeynta dhijitaalka, laakiin shirkadaha maanta ugu waxqabadka badan ayaa si isdaba-joog ah u raadinaya gudaha, xogtooda qeybta kowaad. Khibradaha macaamiisha fiican waxay dalbanayaan xog wanaagsan. Noocyadu waa inay fahmaan shakhsiyaadka iyo dhagaystayaasha qaababka is-dhexgalka kanaalka iyo doorkooda safarka macaamiisha - waxa ay macaamiishu doonayaan iyo goorta ay doonayaan. Xaalad kasta, xogta qeybta koowaad ee macaamiisha dhabta ah waxay noqoneysaa tan ugu waxtar badan.
Natiijooyinka sahanku waxay ku saleysan yihiin 302 suuqley waxaana la qabtay bishii Meey 2015 Econsultancy iyo signal.
Macluumaad Muhiim ah oo aad ka heli doontid Warbixintan
Maxay yihiin faa'iidooyinka tartan ee shirkadaha ku xeel dheer isticmaalka xogta ay leeyihiin?
Xagee waxqabadka sare ka ururiyaan xogtooda xisbiga koowaad iyo maxay kaga duwan tahay tan guud?
Maxay yihiin tillaabooyinka ugu horreeya ee ururada isku dayaya inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan ​​xogtooda koox-kooxeedka koowaad?
Waa maxay noocyada xogta gaarka ah ee lagu qiimeeyo ugu sarreeya saxsanaanta iyo waxtarka?
Tags: xogta macaamiishaxogta macaamiisha roisirdoonka macaamiishasaxnaanta xogtaxogta roisuldaanimoxogta xisbiga ugu horeysaxogta xisbiga labaadsignalkaxogta xisbiga saddexaad
Noocyada Waaweyn ayaa leh dhibaato, Pear wuxuu leeyahay xal
Toos u tijaabi oo u habeyn App-kaaga Mobilada ah sacab